sy lalàna noraisin’ny filoha tamin’ny alalan’ny didy hitsivolana, hoy ny depiote Fidèle Razarapiera. Anisan’ny ilan’ny vahoaka ny solombavambahoaka ny hiady hevitra momba ny lalàna sy ny fanapahan-kevitra raisina eto amin’ny firenena. Zavatra mahagaga raha anatina fivoriana tsy ara-potoana ny fandaniana raha hanao fombafomba (formalité) fotsiny, raha ny hevitr’io depiote io. Ny didy napetraky ny HCC dia amin’ny fivoriana manaraky ny antenimiera ny fandaniana. Tsy niteny hoe fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana. Volam-bahoaka io, izay avoaka ao anaty kitapombolam-panjakana. Iray andro ilay fombafomba dia vita. Ny vola tambiny raisin’ny depiote anefa 12 andro fa tsy iray andro. Inona no tsy niandrasana fivoriana ara-potoana handaniana volam-bahoaka fotsiny raha fombafomba fotsiny no hatao fa tsy hisy adihevitra, hoy ity solombavambahoaka lany tamin’ny anaran’ny antoko TIM sady tompon’andraikitry ny seraseran’io antoko io rahateo.